Halkee ku danbeeyay Kiiskii Ikraan Tahliil? (Shaqooyinka ay soo qabatay iyo Baaritaankii oo socon waayey) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Halkee ku danbeeyay Kiiskii Ikraan Tahliil? (Shaqooyinka ay soo qabatay iyo Baaritaankii oo socon waayey) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Su’aalo ku saabsan halka uu ku danbeeyay Kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay’adda NISA oo la waayey 26 June 2021.
Kadib heshiiskii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ay gaareen 21-kii bishii Okroobar 2021 ayaa mugdi hor leh gelisay kiiskan, waxaana jira in qoyska Ikraan oo horeba u sheegay in kiiskan uu ka socon la’ yahay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay hadda bilaabeen inay ka rajo dhigaan cadaalad ay hesho gabadhooda.
Qodobadda heshiiska ka mid aha in hay’adaha caddaaladda loo madax baneeyo inay baaraan kiiskan, laakiin waxaa socon oo la dhaqaajin waayey baaritanka Kiiska markii hay’adda NISA ay diiday inay ogolaato baaritaan ka baxsan hay’adaha gudaheeda.
Shaqooyinkii ay soo qabatay oo ku koobneyd Hay’adda NISA iyo Maamulka Gobolka Banaadir iyo waxbarasho ay ku qaadatay dalalka Kenya iyo UK ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka Idaacadda VOA-da ee Galka Baarista.
Hoos ka dhageyso Warbixinta Galka baarista ee VOA
Ikran Tahlil Farah
Previous articleDadka Caasimadda Addis Ababa oo Hubkooda la diiwan gelinayo si ay dagaal ugu diyaar garoobaan
Next articleDowladda Itoobiya oo ku dhawaaqday Xaalad degdega iyo Wararkii ugu danbeeyay…